Agro Space: ntuziaka agro maka ndị na-akọ ugbo - magazin "Potato System"
Na ngalaba "Successga nke Ọma Akụkọ", ntanetị Internetntanetị nke "Potato System" magazine na-ebipụta akwụkwọ banyere ụlọ ọrụ ndị ọrụ ha metụtara uto nduku. Mana taa anyi choro igbasa ebe a ma kwue okwu banyere oru intaneti agrarian nke mba uwa meputara site na oru ndi ulo oru si Kyrgyzstan na Tajikistan.
Ọ ga-abụ ihe Agro Space IT n'elu ikpo okwu.
Nke a bụ ọrụ aka nke ụlọ ọrụ AgroInformAsia (Kyrgyzstan), Neksigol Navovar (Tajikistan) na nzukọ ọha na eze Neksigol Mushovir (Tajikistan).
AgroInformAsia bụ ụlọ ọrụ ozi na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njiri mara maka mmepe nke ngwa ọrụ IT maka mmepe nke mmekọrịta B2B, na-enye ozi maka ịme mkpebi dị irè, njikwa ihe ọmụma na ịgba izu.
Nexigol Navovar bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepe nke ngwaọrụ IT maka ọrụ ugbo na mpaghara ndị ọzọ nke akụ na ụba.
Nexigol Mushovir bụ ụlọ ọrụ na-enye ndụmọdụ gbasara ọrụ ugbo na kwa afọ na-enyere ọtụtụ obere ụlọ ọrụ ugbo na obere aka na ọtụtụ puku ndị ọrụ ugbo na Tajikistan iwebata teknụzụ ọhụrụ na mmepụta, nhazi na ịzụ ahịa nke ngwaahịa ugbo, melite ogo ngwaahịa na ị nweta uru uru.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ enweburu ahụmịhe na mmekorita: kemgbe 2015, ha ejirila aka ha mepụta ngwa ọrụ IT dị iche iche ma bulie ha n'etiti ndị ọrụ si Kyrgyzstan na Tajikistan.
Na 2019, ha mebere ikpo okwu Agro Space IT.
A na-eche ikpo okwu maka onye ọ bụla tinyere aka n'ịzụ ahịa ugbo, gụnyere gọọmentị, ụlọ ọrụ sayensị na ndị ndụmọdụ; Ulo oru mmepe ugbo na ime obodo.
Ikpo okwu na-egosi ihe dị iche iche IT, nke eji ya eme ihe na-enye gị ohere ịme mkpebi dị mma maka ijikwa azụmahịa azụmaahịa (n'agbanyeghị otu ngalaba).
Portal nwere interface na Bekee, Kyrgyz, Russian na Tajik.
N'afọ nke mmeghe ya, ebe a na-akpọ Agro Space bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado nke imekọ ihe ọnụ na Autlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-enweghị Arụ Ọrụ nke Russia "Competence Center for Digitalization of the Agro-Industrial Complex" (Tambov).
Agro Space IT nyiwe meriri nke abụọ na asọmpi mba ụwa nke mmemme ọhụụ "Eurasian digital nyiwe 2019", nke Eurasian Economic Commission haziri. Na asọmpi ahụ, usoro ikpo okwu gosipụtara ngwá ọrụ E-Agro Map.
E-Agro Maapụ bụ maapụ elektrọnik na-enye gị ohere ịchọpụta ókè ala dị, tụlee ohere ị ga-akụ ihe ọkụkụ iri atọ na atọ, kwado njikọ na ụlọ ọrụ nhazi na azụmaahịa. Ihe oru ngo a na - enyere aka iwulite mkpebi emere (nyere aka belata ihe egwu, mmeputa na njem njem, wdg).
Ugbu a, mbọ nke ndị mmepe ikpo okwu bụ iji meziwanye ngwaọrụ ndị enyere na saịtị ahụ ma kwalite ha na ọkwa ụwa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ọha na ụlọ na-egosi mmasị na mmekorita na Agro Space.
Ikpo okwu a na-enye ohere inweta ngwa iri na asaa nke na-enyere aka ịmepụta nrụpụta ọrụ dị iche iche nke ihe ubi dị iche iche; enwere bọọdụ mkpọsa eletrọnik; enwere ọbá akwụkwọ eletrọnịkị, nke a na-eji emelitere ọzụzụ ọhụụ yana ihe ọmụma ọhụụ oge niile.
Ndị ọbịa Portal nwere ike iji maapụ elektrọnik nwere ozi gbasara mmepụta nke mkpụrụ 50 + maka oge 2012-2019 na ọkwa mpaghara; vidio nkuzi na ozi.
Ihe ikpo okwu a na-enye ihe omuma nke oge banyere ahia ahia ahia nke ahia ugbo na Tajikistan na Kyrgyzstan; amalitela igwe kalịnda na-enye gị ohere ịgbakọ ego mkpụrụ, nri na mmiri mgbe ị na-eto ọtụtụ ụdị inine.
Ka ọ na-erule Ọktọba 2020, ihe dịka otu nde ndị ọrụ si mba 40+ ejirila ike ikpo okwu. Ikekwe akụ a https://agro-asia.com/ru ga-abakwara gi uru?
Tags: AGRO Ohere
Tomsk na acho imepe mmeghe nke friji French
Russia emeela ka mbupụ nduku site na otu ụzọ n'ụzọ atọ
Sdị ụlọ ọrụ Ural na-akọ ugbo nwere ike ịpụta na kaadị nke Rosselkhozbank - mmiri ara ehi, àkwá, poteto